सानैमा बिहे ? “नो” |
सानैमा बिहे ? “नो”
प्रकाशित मिति :2019-10-15 11:38:30
कपिलवस्तु । १६ वर्षकी गिता चाहिलाई बालविवाह गर्नु अपराध हो भन्ने लाग्छ । बालविवाहले किशोर किशोरीमा नराम्रो प्रभाव पार्छ भन्ने बुझेकी छन् । सानैमा विवाह गर्दा पढ्ने अवसरबाट बन्चित हुन्छ । धैरै खाले शारीरिक र मानसिक समस्या पैदा हुन्छन् भन्ने पनि सुनेकी छन् । त्यसैले उनी अहिले नै बिहे गर्ने सोचमा छैनन् ।
शुद्धोधन गाउँपालिकाकि गिता हाल मोतीभारी निमाविमा कक्षा ९ मा पढ्छिन । पढाई पुरा गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिएपछी मात्रै बिहे गर्ने उनको सोच छ ।” त्यसैले म त भन्छु, सानैमा बिहे ! “नो” ।
कृष्णनगर नगरपालिकाकी १७ वर्षकी कुसुम यादवलाई पनि बालविवाह गर्न हुदैन भन्ने जानकारी भएको छ । उनी भन्छिन्, “उमेर नपुग्दै विवाह गरेमा सधैभरी यातना अनि दुःख खेप्नु पर्छ । पढ्ने उमेरमा विवाह गर्दा शरीर अस्वस्थ हुनुका साथै सधैभरी बिरामी पनि हुनसक्छ । त्यसैले बालविवाह रोक्न सबै लाग्नु पर्छ ।” कुसुमले विशेष गरी बालविवाह विरुद्ध अभिभावकलाई बुझाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
महेन्द्र मावि विद्यालय कृष्णनगरमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत कुसुमलाई पनि बालविवाह सामाजिक अपराध हो भन्ने थाहा छ । उनले अगाडि भनिन्,“म आफू पनि उमेर नपुगी विवाह गर्दिन र आफन्त, वरपर छिमेकमा पनि बालविवाह गर्न दिन्न ।”
शुद्धोधन गाउँपालिकाकी १५ वर्षकी सिन्धा गुप्ता बालविवाहका बारेमा बुझ्न थालेकी छन् । “२० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा कानून अनुसार कारवाही हुन्छ । त्यसैले उमेर नपुग्दै विवाह गर्नु हुदैन” उनी भन्छिन् ।
पढाई सकेपछि आफ्नै खुट्टामा उभिएर मात्र विवाह गर्ने उनको सोच छ । उनी मोतीवारी मावि लवनीमा कक्षा ८ मा पढ्छिन । “बालविवाह गर्नु भनेको सामाजिक अपराध हो, कसैले गर्नु हुदैन । यदि कहिँकतै बालविवाह हुँदैछ भन्ने थाहा भो भने प्रहरीलाई खवर गर्नुपर्छ” उनले सुझाइन ।
यशोधरा गाउँपालिकाका हरिओम यादवलाई बालविवाह शब्दले नै निकै डर लाग्ने बताए । “मेरो परिवारमा बालविवाह गरेर धैरै दुःख भएको छ । त्यसैले वालविवाहको कुरा सुन्दा मुटु पोल्छ” उनले भने ।
बालविवाह रोक्न र सबै नागरिकमा शिक्षा पुर्याउन स्थानीय तह लाग्नु पर्ने उनको धारणा छ । बालविवाह गरेमा के हुन्छ रु बालविवाह भनेको के हो रु लगायतका विषयमा २ दिने जिल्ला स्तरको वृहत भेलामा सहभागी भएपछि बालबालिकाहरु सचेत भएका छन् ।
सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई बालविवाह मुक्त गर्ने सरकारी रणनीति छ । सोही रणनीति अनुसार कपिलवस्तुमा वुद्धभुमि नगरपालिका नेपालमै पहिलो बालविवाह मुक्त घोषणा भैसकेको छ भने अन्य नगरपालिका र गाउँपालिका पनि बालविवाह मुक्त गराउने कार्यमा लागेका छन् ।
२०६८ को जनगणना अनुसार जिल्लामा ६७ प्रतिशत बालविवाह भएको छ । बालविवाह धैरै जसो मधेशी र मुस्लिम समुदाय हुने गरेको छ । जिल्लामा बालविवाह चुनौतिका रुपमा रहेको छ ।
अभिभावकलाई नै बालविवाह गर्नु हुदैन भन्ने सचेतीकरण गर्नु आवश्यक रहेको युएनएफपिएका फिल्ड संयोजक चित्र महतोले बताए ।
२० वर्षभन्दा कम उमेरका पुरुष र महिलाबीच विवाह गर्न नहुने, विवाह भए त्यस्तो विवाह स्वतस् बदर हुने र त्यस्तो विवाह बालविवाह ठहर भई विवाह गर्ने गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। ।